Khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo Faroole ka jeediyey shirkii Kampala+Sawiro – SBC
Khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo Faroole ka jeediyey shirkii Kampala+Sawiro
Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole ayaa khubad uu ka jeediyey kulankii maanta magaalada Kampala ee caasimada wadanka Ugandha ka dhacay ee ay soo abaabushay kooxda xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya wuxuu kaga hadley arimo fara badna oo ku aadan xaalada Soomaaliya & Puntland.
Khubad qoraal ah oo afingiriis ah oo uu fadhigaasi ka jeediyey C/raxmaan Faroole oo fariimaha E-mail-ka caawa xafiiska warfaafinta Madaxweynaha Puntland SBC soo gaarsiiyey ayaan idiin soo gudbinaynaa inoo soo turjunay nuxurka khudbadaha Madaxweynaha Puntland.
Ugu horeyn Madaxweynuhu wuxuu uga mahadceliyey dawladaha Ugandha & Burundi yabooha ay ciidamada ugu soo direen dalka Soomaaliya si ay uga qayb qaatan arimaha dib u soo celinta amaanka iyo xasiloonida.
Faroole wuxuu ku tilmaamay ciidamada AMISOM ee ku sugan Muqdisho kuwa dagaalamaya xagjiriinta & argagixisada, waxanaa uu tacsi u direy qoysaska askartii lagu diley iska horimaadyada Muqdisho.
Madaxweyne Faroole wuxuu shirka ka horsheegay in kooxaha argagixisada, ee Al-Qaacida gaar ahaan unugyadeeda Soomaaliya & Yemen ay Qatar weyn ku yihiin amaanka Puntland, wuxuuna sheegay in dawlada Puntland ay aad uga walaacsan taahy xaaladaha sii xumaanaya ee wadanka Yemen, taasi oo uu sheegay in ay saameyn ku yeelanayso Soomaaliya gaar ahaan Puntland, wuxuuna xusey in goor sii horeyseyba kumaan kun oo qaxooti ka soo firxanaya dagaalada Yemen ay dib u soo laabanayaan Puntland.
Kooxaha Al-Shabaab ayuu ku xusey khudbadiisa Madaxweynuhu inay isku urursanayaan buuraleyda Golis ee Puntland & dhul xeebeedka xeebaha waqooyi, wuxuu sheegay waa sida hadalka uu u yiriy’e in kooxdan argagixisada ah ay doonayso inay wiiqdo amaanka Puntland, isla markaana ay Qatar ku tahay ahmiyada biyo badeedka gacanka Cadmeed, wuxuu xusey in xiligan ay ciidamada Puntland ay diyaar ugu jiraan sidii ay u wajihi lahaayeen kooxahaasi ku sugan Buuraleyda.
Wuxuu ku nuuxnuuxsadey C/raxmaan Faroole in ay aad ugu riyaaqayaan Puntland ahaan hawlaha ciidamada AMISOM ay ka wadaan magaalada Muqdisho si ay u xoojiyaan hay’adaha federaaliga ah ee dawlada FKMG ah ee Soomaaliya, wuxuu sheegay in inkastoo ay Puntland ka jirto nabad, hadana loo baahan yahay in la sii xaqiijiyo oo la sii adkeeyo nabadaasi, sidaasi darteed xukuumada Puntland ay codsanayso in cutubyo ciidamo ah oo ka socda AMISOM balse shuruudo wata la keeno Puntland, si loo sameeyo ciidamo isku dhaf ah oo bilaaba tabababar la siinayo ciidamada Puntland, kuwaasi oo lagu tababaro gudaha Puntland.
Madaxweyne Faroole wuxuu sheegay in Puntland ay taageersan tahay hindisaha Midowga Afrika eek u aadan in Soomaaliya qaybo ka mid ah lagu soo rogo xayiraad dhanka gaadiidka badda gaar ahaan deegaanada kooxaha mucaaradka Al-Shabaab ay maamulaan, isagoo sidoo kale sheegay in ay taageerayso Puntland taageero xaga jirka ah oo al siiyo ciidamada AMISOM.
Wuxuu Madaxweynaha Puntland sheegay in loo baahan yahay in taageero loo fidiyo dadka ku dhaqan deegaanada xeebaha isla markaana laga taageero dhinaca mashaarciida, dhismaha nabadda, mashaariic horumar ah oo ay ka mid yihiin warshado kaluun, iyo adeegyada kale ee kaluumaysiga.
Wuxuu sheegay in loo baahan yahay in loo fidiyo taageero ciidamada badda ee Puntland Puntland Marine Force (PMF), isla markaana iyadoo la raacayo qaraarada golaha Amaanka ee qaramada midoobey ee ka dhanka ah burcad badeeda tababaro la siiyo ciidamada xeebaha ee Puntland si ay u qaadaan hawlgalo ka dhan ah kooxaha burcad badeeda taasi oo ah in burcad badeeda dhanka dhulka lagala dagaalamo.
Dhamaadka waqtiga DFKMG
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in doorashada jagooyinka madaxweynaha & gudoomiyaha Baarlamanka ay tahay in ay dhacaan ka hor 20-ka bisha August oo ah xiliga uu ku egyahay jiritaanka hay’adaha dawlada FKMG ah, wuxuu sheegay in ay la tahay in doorashadu ka dhacdo gudaha Soomaaliya gaar ahaan goobaha ay ka jirto nabada & degenaanshaha.
Wuxuu sheegay in Puntland ay ayidsan tahay mirihii ka soo baxay shirkii heerkiisu sareeyey ee ay qaramada midoobay soo agaasintey ee ka dhacay Nairobi ee khuseeyey arimaha Soomaaliya 12-13 April 2011, kaasi oo soo jeediyey in mudo laba sano ah lagu kordhiyo Baarlamanka Federealka KMG ah taasi oo ujeedkeedu yahay in la badbaadiyo aasaaska hay’adaha dawlada isla markaana looga fogaado inay timaado banaansho xaga maamulka ah.
Wuxuu muujiyey in loo baahan yahay in la dhimo tirada xubnaha Baarlamanka ee gaarsiisan iminka 550, lagana soo reebo tiro macquul ah sida 185, iyadoo laga gudbayo nidaamka qabiilka ku saleysan ee 4.5, laguna soo xulo xildhibaanka maqaamkiisa intii lagu soo xuli lahaa habka aan cadaalad aheyn.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in aaminsan yihiin in wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada Midoobay Ambassador Mahiga uu jeeniga u sii qabto hawlaha kale ee dhiman la xiriira waqtiga kala guurka, isagoo xusey in Puntland ay sida ugu dhakhsiyaha badan u soo magacaaban doonto wakiiladeeda gudiga diyaarinta doorashooyinka ee uu ku baaqay Ambassador Mahiga.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in dawlada la wareegaysa xafiiska ka dib bisha August ee sanadkan looga baahan yahay in qaado talaabooyinka muhiimka ah ee hawlaha waqtiga kala guurka mudo laba sano ah, sida arimaha dib u heshiisiinta, dhameystirka dastuurka qabyada ah oo ay ka mid tahay sharciyada ku aadan nidaam cusub oo maamulada federaalka.
Dawlad goboleedyada sharciga ah & Maamulada gobolada waa in la xoojiyaa lana siiyo taageero hay’adeed, isla markaana dhamaan dawlad goboleedyada la dhameystiro ka hor 20-ka bisha August 2013-ka ayuu ku xusey khudbadiisa madaxweyne Faroole.
Madaxweyne Faroole wuxuu sheegay in Puntland ay ka mid tahay udub dhexaadka hay’adaha Federaalka KMG ah, wuxuu carabka ku dhuftey in laga soo bilaabo 2004-tii Puntland ay u hurtey 3 kun oo ciidamo ah oo ay geysey Muqdisho, kuwaasi oo boqolaal ka mid ah naftoodii ku waayey iyagoo u adeegayada DFKMG ah ee Soomaaliya,
Puntland waxaa la aasasay si dawlad goboleed Federaal ah sanadkii 1998-kii, Soomaaliya waxay qaadatey 2004-tii nidaamka Federaalka habkaasi oo ah habka kaliya ee u shaqeyn kara dawlad ahaan ka dib 30 dawlad dhexe ah iyo 20 sano oo fawdo ah ayuu ku yiri khudbadiisa C/raxmaan.
Arimaha gargaarka & xuquuqda aadamaha
Madaxweynuhu wuxuu khudbadiisa ku xusey in Puntland ay tixgalinayso isla markaana ay dhawrayso sharafta iyo xuquuqda aadamaha dhamaan dadka taasi oo ah mid salka ku haysa dastuurka dawlada Puntland.
Wuxuu sheegay in ay Puntland ay martigalinayso in ka badan 300 kun oo dadka barakacayaasha ah oo ku jira xeryaha qaxootiga, kuwaasi oo badankoodu ka yimid Koonfurta Soomaaliya, taasina ay culeys weyn ku tahay dhaqaalaha Puntland, iyadoo aanay jirin taageero ka timaada beesha caalamka oo lagu sugo xaaladaha xeryaha dadka soo barakacay.
Halkan ka akhri khudbadii Madaxweynaha Puntland oo dhameystiran oo English ah